Laurent Koscielny oo shaki laga muujinayo inuu ka soo muuqdo kulanka PSG ee Champions League – Gool FM
Laurent Koscielny oo shaki laga muujinayo inuu ka soo muuqdo kulanka PSG ee Champions League
Byare September 12, 2016
LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 10: of Arsenal during the Premier League match between Arsenal and Southampton at Emirates Stadium on September 10, 2016 in London, England. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)
(London) 12 Sebt 2016. Daafaca Arsenal Laurent Koscielny ayaa shaki laga muujinayaa taam ahaanshihiisa kulanka habeen dambe ay Gunners la ciyaari doonto PSG tartanka Champions League.
Xiddiga reer France ayaa waxaa wajiga ka gaaray jug kulankii dhawaa ay Arsenal 2-1 uga adkaatay kooxda Southampton.
Gunners ayay jug wayn ku noqon doontaa haddii uu 31-jirka taam u noqon waayo kulanka habeen dambe ee Champions League, waxayna dhanka daafaca ku tiirsanaan doonaan xiddiga cusub ee aan weli la qabsan kooxda ee Shkodran Mustafi iyo da’yarka Rob Holding oo qudhiisa aan si fiican ula qabsan kooxda.
Tababare Arsene Wenger oo walaac ka muujinaya dhaawaca Koscielny ayaa ciyaartii Southampton kaddib sheegay in barar dartii ay la qarsoontay isha daafaca reer France.
Per Mertesacker iyo Gabriel Paulista ayaa horey dhaawacyo uga maqnaa kooxda Arsenal haddii uuna ku darsamo Laurent Koscielny waxaan shaki ku jirin inuu jiri doono qal-qal dhanka daafaca ah.
SAWIRRO GAAR AH: Kooxda Dekadda oo saakay u safartay dalka Jabuuti si ay uga qeyb gasho…
“Real Madrid way ku guuleysan doontaa La Liga kal ciyaareedkan.”. Cristiano Ronaldo